🥇 ▷ OnePlus TV ayaa Xaqiijiyay in lagu soo Bandhigay QLED Show, Android TV iyo inbadan ✅
OnePlus TV ayaa Xaqiijiyay in lagu soo Bandhigay QLED Show, Android TV iyo inbadan
Ka dib markii ay aasaastay aqoonsigeeda astaanta dhabta ah ee dilaaga caanka ah ee casriga ah, OnePlus wuxuu hada raadinayaa inuu sii balaariyo borotokoolka uuna carqaladeeyo qeybta TV-ga caqliga badan ee Hindiya. Waxaa jiray shaki badan oo ku saabsan sida saxda ah ee OnePlus uu qorsheynayo inuu noogu soo bandhigo TV-ga OnePlus, kaasoo magaciisa iyo astaantiisa la xaqiijiyay horaantii bishaan. Hagaag, OnePlus ayaa hadda laftiisu bilaabay inuu kaftamo astaamaha muhiimka ah, oo ay la socoto xaqiijin ka timid madaxa shirkadda Pete Lau laftiisa.
Pete Lau, markii uu wadahadal la yeeshay Gadgets360, wuxuu wadaagay faahfaahin aad u yar oo ah waxa aan ka filan karno TV-ga soo socda ee OnePlus. Marka hore, waxaa la isla dhex marayay in OnePlus TV uu ku imaan karo tiro cabbirro kaladuwan ah i.e. 43-inji, 55-inji, 65-inji, iyo 75-inji. Waxay, si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa sidii rabitaanka Shiinaha ee weyn bilaabi safarkooda smart ee TV-ga ah moodal 55-inch ah.
OnePlus maanta waxay soo dhigtay barteeda shaashadda, taasoo sii shaacineysa taas waxaa jiri doona guddi QLED ah – sida looga soo horjeedo wararka xanta ah ee OLED. QLED, kuwa aan ka warqabin, waxay u taagan tahay Quantum Light Emitting Diode waxayna adeegsaneysaa “dhibco dhibco” oo lagu dhejiyay guddigeeda LCD. Waxaa laga yaabaa inaysan ka sareynin sida shaashadda OLED laakiin waa inay bixiso khibrad aragnimo oo is dhexgalka ah.
Kusoo qaad waayo-aragnimo aan muuqanaynin oo leh muuqaal 55 display QLED ah oo ku yaal OnePlus TV ????
Ogeysii – https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W
– OnePlus India (@OnePlus_IN) Ogosto 22, 2019
Isaga dhaqaaq, Lau wuxuu aaminsan yahay in TV-ga uusan sii ahaan doonin TV shan ilaa toban sano ah wadada. Taabadalkeed, waxay noqon doontaa soo bandhigid caqli badan oo dusha saari doonta dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay oo AI door weyn ayey ka ciyaari doontaa isbadalkan. Wuxuu intaas ku sii daray in OnePlus TV uu u isticmaali doono Android TV si uu u xoojiyo khibradda, laakiin shirkadda Shiinaha ayaa sida muuqata iska caabinaysa kombiyuutarka ‘UX’ oo siineysa caado ‘hagaagsan’ oo UI ah.
Xitaa waad awoodi kartaa inaad ‘adigoon xalin’ qoraalka aad ku qortid telefishankaaga OnePlus adigoo isticmaalaya taleefanka OnePlus gacantaada ku jira. Waa wax yar oo sidan oo kale ah taas oo kor u qaadi doonta waayo-aragnimada guud ee isticmaaleyaasha.
Mid ka mid ah muujinta ugu muhiimsan ee wareysiga ayaa ah inuu noqdo faahfaahinta qiimaha. Haa, Lau wuxuu ka hadlay sida OnePlus TV loo qiimeyn doono, isagoo daaha ka qaaday inay soo bandhigi doonto khibrad qaali ah oo dheeri ah. Si ka duwan Xiaomi, VU, iyo kuwa sameeya barnaamijyo smart smart TV ah, OnePlus wuxuu raadinayaa inuu bartilmaameedsado ciyaartooyda heerka sare sida Sony iyo Samsung. Waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso muuqaal weyn iyo tayo sare laakiin laakiin “waxyar ka raqiisan” marka loo eego tartamayaasha aadka u sareeya.
Waxaan dooneynaa inaan diirada saarno meelaynta lacagta caymiska, waxaan kaliya diirada saareynaa meelaynta calanka sumadda, ayuu ku adkeystay Lau inta lagu gudajiray wareysiga. Marka, haddii aad sii wadayso iibsiga iibsiga Xiaomi Mi TV oo la awoodi karo, markaa waa inaad horay usii wadataa iibsigaas. Maxad ka filaysaa barnaamijka OnePlus TV? Noosheeg faallooyinka hoose.